Ogaden News Agency (ONA) – Riyada iyo Hadaaqa Wayaanaha iyo Cabdi iley oo ka dhamaan la’ isfahanwaa ayaa ku kala dhex jira C/lahi Xuseen iyo ..
Posted by ONA Admin	/ January 30, 2014
Ugu horayn anigoo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda S.Ogadenia la qaybsanaya dareenka laga qaaday arintii ka dhacday Nairobi, sikastoo ay u dhacdayna aana qadarka Alle cidina dhaafayn balse dhinaca kalana aan aad ugu faraxsanahay inay maanta dhacdadaas awgeed dad badan oo aana taageersanayn ONLF balse danaynayay inay nabad cadaalad ku dhisan labada dhinacba lagu heshiiyo dhalato ay fahmeen una cadaatay halka sirdoonka Itobiya iyo Jananada ku naaxay dhiiga shacabka iyo Cabdi Iley-ga ay adeegsadaan ay ka taaganyihiin inayna shacabkaasi marnaba nabad ku noolaanin oo sida ay dad badan oo aan xidhiidh leenahay ii sheegeen aysan hada kadib waxba dib ula hadhi doonin wallow calool adayga lagu kala duwan yahay.
Run ahaantii aad uma xiiseeyo inaan kahadlo waxyaabaha website yada Cabdi illey lagusoo daabaco maadama aan horey u ogsoonaa inaysan sal iyo raad toona lahayn balse hadana waxaa dhici karta inay dadka qaarkooda aan indheer-garadka ama xog-ogaalka ahayni ay run moodaan. Marka bal waa inaan dadka noocaa ah xoogaa mar marka qaar wax layara wadaagno sidaan qabo.
Qoraal aan wakhti aana fogayn u gudbiyay shabakadaha qaar lana daabacay ayaan kaga faallooday ujeedada ka danbaysa hadalada mala awaalka ah ee Cabdi illey soo daabaco marka qoraalkan ku dheeraan maayo, waxaanse idin la wadaagi fikirkan hoose maadaama uu aad ugu celcelinayo Cabdi illey inaan isku dhacsanahay JWXO.
Marka koobaad, dadku sidoodaba marka ay hawli dhex marto ama shaqo la isugu yimaado haday tahay mid halgan iyo haday tahay mid shakhsi ahaaneedba isku dhac inuu yimaado waxaa saldhig u ah ama horseed u ah hawshii ay markii hore dadkaasi isugu yimaadeen nooca ay ahayd.
Haddii markii horeba la isugu yimid ama hawsha lawada qabanayay ay ahayd mid kusalaysan dano shakhsi ahaaneed dabcan isfahan waa iyo isku dhac waa hubaal inuu iman, laakiin haddii arinta la isugu yimid oo lagu kulmay ay tahay dan guud in lawada qabto, oo waliba shacabka dulman ee aana codkooda xuduuda soo dhaafin karin loo gurmado meel uu isku dhac ama isfahan waa ka iman karo iima muuqato, waa marka uu ruuxa maskaxda caafimaadka qabta lihi arimaha sidaa uga fikiro.
Haddii aan wax yar oo aana hadal nin wayn ahayn balse run ah idiinka sheego dhaqamada Cabdi illey, mana jiro qof iiga xog-ogaalsan, marwalba oo ay xaaladi ku adkaato wuxuu ka sawirtaa maskaxdiisa waxa uu jecel yahay kadibna wuxuu u yeedhaa dhowr nin oo laqayila markaasuu arintaas uga sheekeeyaa, dhowrkaas nina way u marxabeeyaan iyagoo aad u qoslaya oo kuleh in laguu waxyooday baad moodaa sidaad xaqiiqada u heshay. Cabdi illey islamarkiiba arintii wuxuu isku qanciyaa inay u rumawday oo ay dhacday kadibna wuxuu u gudbiyaa hadba ruuxa u qaabilsan qoraalada website yada kala duduwan ee uu leeyahay uguna talo galay inuu dadka ku jaha-wareeriyo, mana diidi karaan waxnakamabadali karaan hadalka uu u sheego. Hase ahaatee waxaa mucjiso ah inuu marwalba ku indho cadyahay riyo cusub marka ay riyadii hore soo afjaranto oo la ogaado inay been ahayd.
Wakhti aad u gaaban ayaa kasoo wareegay markii uusuuqa madaw soo galiyay in Cabdulaahi Xuseen iyo hogaanka warfaafinta ee jwxo mudane Xuseen ay isku dhaceen taasoo ahayd been aysan waxba ka jirin xaqiiqadana aad uga fog noqotayna arin lawada ogaaday. Sababta uu sidaa ugu riyoodayna waxay ahayd markii dadka u warama u sheegeen xidhiidhka aadka u qiimaha sareeya ee naga dhexeeya HWF, midaa darteed ayuu riyadaas usameeyay. Hadana mid cusub ayuu ku riyooday oo uu leeyahay Cabdulaahi iyo Jaaliyadihii ayaa isku dhacsan taasina inay xaqiiqda ka fogtahay waxbana aysan kajirin waxaa cadayn u ah inaan maalinkabariah ee jimcaha ah aadi doonoDenmarksi aan uga qayb galo shirka ay waftiga uu Gudoomiyuhu horkacayo qabanayaan islamarkaana ugu soo bandhigo filinkii iyo kuwo kale oo cusub.
Dhanka amaankayga wax walwal ahkamataagna wadan nabad ah ayaana ku suganahay inaan marwalba feejignaado oo aan qorshaha Wayaanaha ee shirqoolka dhankayga ah fashiliyo warbaahinta caalamkana lagusoo qaatana macnaheedu maaha inaan khatar ku suganahay oo aanan dhaq-dhaqaaq samayn karin, sababtoo ah ma’aanan sheegeen wadanka aan usocdo ama safaro isdaba joog ah magaleen.
Muhiimada ayaa waxay tahay inay xanuun aad u xun ku noqotay Cabdi illey wadashaqaynta iyo is-jacaylka iyo is-ixtiraamka naga dhexeeya dhamaan dadka halganka ku jira waana mid waligeed socon doonta inay sii xoogaysato mooyee aana marna is dhimi doonin. Sidaas oo ay tahay ayaana wali filinkii iyo hawlihii kale ee aan waday aana kasoo jeedsan ee marka aan toos u hawlgalo tollow miyuu waalan doonaa.
Waxaan Halkan ka salaamayaa cabdullahi Xussen oo ah geesi
Is garabtaagay cadaaladda iyo runta
Abdi Ilay waa nin la adeegsanayo wanna nin laga dhex hadlayo Waxaa ka dhex hadlaya waa gumaysiga, iyo Kuwa howlsha u dirsaday,
Marka wuxuu noqday neef gowracan geedo Kama waabto